रोनाल्डोको खेल देखेर मेस्सी चकित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
रोनाल्डोको खेल देखेर मेस्सी चकित
एजेन्सी । बार्सिलोनाका स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीले च्याम्पियन्स लिगमा एट्लेटिको मड्रिडविरुद्धको खेलमा युभेन्ट्सका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गरेको प्रर्दशनले आफु चकित बनेको बताएका छन् ।
च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत अन्तिम १६ को दोस्रो लेगमा रोनाल्डोले ह्याट्रिक गरेपछि एट्लेटिकोलाई ३–२ ले हराएर युभेन्ट्सले क्वाटरफाइनलको यात्रा तय गरेको थियो ।
एट्लेटिकोको डिफेन्स क्लब फुटबलमै सर्वाधिक बलियो डिफेन्स मानिन्छ । तर, रोनाल्डोले एट्लेटिकोको डिफेन्स सहजै ध्वस्त बनाए। उक्त ह्याट्रिक प्रदर्शनपछि मेस्सीले रोनाल्डोको जादुमयी प्रदर्शनबाट आफु छक्क परेको बताए ।
‘क्रिस्टियानो र युभेन्ट्स अति उत्तम छ । यो एउटा ठूलो आश्चर्य हो किनभने मैले सोचेको थिए एट्लेटिको बलियो छ,’ लियोनविरुद्धको खेलपछि मेस्सीले भने, तर, क्रिस्टियानोको जादुमयी ३ गोलमा युभेन्ट्सले उनीहरुलाई पराजित गर्यो।’
यस्तै मेस्सीले अन्तिम आठको ड्रबाट आउने प्रतिद्वन्दीबारे नसोचेको बताए ।
‘सबै प्रतिद्वन्दी कठिन हुन्छन् । हामी छान्न सक्दैनौ’ मेस्सीले थपे, ‘हामीले ड्र पर्खनु पर्दछ र हाम्रो प्रतिद्वन्दी को हुनेछ ।’